स्वास्थ्य Archives - Page 94 of 142 - Sabal Post
आन्दोलनरत नर्स र अस्पतालबीच १० बुँदे सहमति
आन्दोलनरत नर्सहरुले अनसन तोडेका छन् । अस्पताल प्रशासनबीच १० बुँदे सहमति भएपछि नर्सहरुले अनसन तोडेका हुन् । अनसनरत दिक्की शेर्पा र जिता बरालले अनसन तोडेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र आन्दोलनरत
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
काठमाडौं-काठमाडौं उपत्यका लगाएत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ह्वात्तै गर्मी चढिसकेको छ । यस्तो गर्मी मौसममा स्वस्थ्य रहन खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै गर्मी मौसममा विभिन्न फलफूलको सेवन गर्नु लाभदायी मानिन्छ । गर्मीको सिजनमा पाइने फलफूलमध्ये मेवा पनि एक
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
गर्मी मौसममा प्याजको सेवन यस्ता छन् फाइदाहरु
एजेन्सी -केही साता अघिदेखि गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो गर्मी सिजनमा मानिसहरुले खानपानमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । गर्मी सिजनमा कयौं मानिसहरुले आफूलाई तन्दुरुस्त राख्न चिसो चिज बढी खान्छन् । केहीले त आफ्नो भोजन नै कम गर्ने गर्छन्
येस्ता ब्याक्तिले करेला खानु हुदैन
करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ ।त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुदैन । गर्भवती हुनुहुन्छ: करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । बढी करेलाको
अनसनमा रहेका नर्सको माग पूरा गर्न डा. गोविन्द केसीको आग्रह !
काठमाडौँ - डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसनमा बसेका दुई जना नर्सको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । केसीले आईतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेशागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनसनरत नर्सहरु जिता बराल र डिकी शेर्पाको माग पूरा
हुम्ला - नाम्खा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा महाबौद्ध मावि याल्वाङमा अध्ययनरत ८१ किशोरीलाई महिनावारी हुँदा स्वास्थ्य रहनुपर्ने तरिका तथा प्याड बनाउन एकदिने तालीम दिइएको छ । महिलालाई महिनावारीको समयमा सुरक्षित राख्नका लागि पहिलोपटक उक्त गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा रहेको
बुटवल - पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका गर्भवती महिलाको घरमै गर्भजाँच सेवा दिन थालेको छ। नपाले गत शुक्रबारदेखि चिकित्सकसहितको टोली गर्भवतीको घरमै पुगेर गर्भजाँचअन्तर्गत भिडियो एक्स–रे सेवासमेत उपलब्ध गराएको हो। गर्भवती महिलाको घरमै भिडियो सेवासहितको गर्भजाँच कार्यक्रमको नपास्थित वडा नं १
गर्मी मौसमको फल काफल खानुका फाईदाहरु जान्नुहोस् !
तपाईले काफल खानुभएको छ ? पहाडमा पाईने अमिलो स्वादको फल हो काफल । यो गर्मी महिनामा पाईन्छ । यसको आकार लाम्चो र गोलो हुन्छ। काफलको रङ काँचोमा हरियो हुन्छ भने पाकेपछि यसको रङ बैजनी हुन्छ । काफललाई स्वादको रुपमा भन्दा
एजेन्सी -ढाड दुख्ने समस्या त बुडा देखि युवा सम्मका मानिसहरुलाई हुने गदर्छ । आफैमा यो एउटा रोग हो । ढाड दुख्ने समस्या भएका व्यक्तिलाई कपुरको प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुने गदर्छ । दुई पुरिया कपुरमा एउटा कागतीको रस मिसाएर मनतातो
दैनिक जीवनमा दुध सँगै महसेवन गर्नाले चमत्कारिक फाईदा लिन सकिने
एजेन्सी -दूध पिउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ, यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर यदि तपाईले दूधमा मह मिलाउनुहुन्छ भने यसबाट कयौँ गुणा बढी फाइदा प्राप्त हुन्छ । यति मात्र नभई स्वास्थ्य समस्याहरूबाट पनि जोगाई राख्न मद्दत गर्छ ।